Xildhibaan A/Yasin Ayaane oo shir jaa’id ku qabtay Hargaysa. « CEELBARDAALENEWS.COM
« AN EYE FOR AN EYE, A TOOTH FOR A TOOTH.
Dowlada S/L waa inay ku dhawaaqdo awood la’aan … »
Xildhibaan A/Yasin Ayaane oo shir jaa’id ku qabtay Hargaysa.
Hargeysa (Ceelbardaale-press)- Xildhibaan Axmed yaasiin Sheekh Cali Ayaanle oo ka tirsan Mudaneyaasha Golaha Wakiilada ee xisbiga UDUB uga soo baxay Gobolka Awdal, ayaa sheegay in reer Boorama qadiyada Somaliland ka tahay mabda’ iyo aaminaad ee aanay ahayn wax xaalad timaada ay kaga tegi karaan.
Md. Axmedyaasiin oo maanta shir jaraa’id ku qabtay huteelka Imperial ee magaalada Hargeysa, waxa uu faahfaahin dheer ka bixiyey sidii ay ku timi qaranimada Somaliland iyo kaalintee ay ku lahaayeen reer Boorama oo uu tilmaamay inay ahayd mid aad u weyn, kana go’nayd qaranimada Somaliland.
Xildhibaanku waxa uu si kulul u cambaareeyey falkii jidgooyada ahaa ee koox dablay ahi ku dileen jidka u dhexeeya Kala-baydh iyo Dila, waxaannu xukuumadda ugu baaqay inay si degdeg ah nimankaasi sharciga u horkeento. Waxa kale oo uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee degaanka Ceelbardaale ku muransan, waxaannu yidhi; “Waxa wax walba idin dheer dadkiina walaalaha ah ee isku dilaya degaankaasow waxaad isku tihiin rixim (Qaraabo).
In maanta la is dilaa waa wax aad looga muragoodo, waa wax labaatan sanno qarankii aynu soo dhisaynay ee Somaliland dib u celinaya, waa wax maalin keliya qaran ku dumin kara. Haddii is dishaan iyo haddii aad heshii-naysaanba waligiin waad is dhex deganaanaysaan haddii aad is dishaana ehelu naar ayaad tihiin. Waar dhal iyo dhasheed ayaad tihiin, kiinii loo xukumo maahee ka kalena waa riximkiisi oo ka qadimaayo.”
“Yaan Ceel-bardaalle laga dhigin Isreal iyo Falastiin ee waa dad walaalo ah oo deegaan isku haysta oo in la kala saari karaana ay macquul xooga tahay, waxaan leeyahay walaalyaal isu tanaasula oo miiska wada hadalka iskugu yimaada, oo toobad keena oo dadka la gawracayo ha la joojiyo,”ayuu Xildhibaan Axmed-Yaasiin, waxaanu intaasi ku daray,” ayuu intaa raaciyey.
Md. Axmedyaasiin waxa uu sheegay in reer Boorama kaalin weyn oo lama ilaawaan ah ku lahaayeen dhidibo-u-taagidii qaranimada Somaliland, isla markaana aanay ahayn wax maanta ay si fudud u tuuri karaan, isagoo ku dooday in dhallinyaradii reer Boorama ee dhawaan qaatay calanka Soomaaliya ay ahayd arrin cadho ka keentay, balse la siyaasaydaynayo.
“Maalmahanba waxa saxaafada ku badnayd warar sheegayay calanka Somaliland oo la gubay iyo calan buluug ah oo Boorame la sudhay,Boorame Somalilandnimadeedu wax xaaladi keentay ma aha xaaladina ma bedelayso, waa qadiyad dadweynahaasi qaateen aamineen oo aan la bedeli karin.
Dastuurka Somaliland ee aan ugu codeynay gooni isku taaga Somaliland waxay ahayd oo ogolaaday 97%, halka 3% diideen tiradaasina waa dad badan markaa 3% dii waxay joogaan magaalo walba oo Somaliland ka tirsan Boorame, Hargeysa iyo Burcoba,” ayuu yidhi Md. Axmed Yaasiin, waxaannu intaa ku daray, “Anigu waxaan daraasad aan sameeyay Soomaalidu haddii ninku ka cadhoodo dano
shakhsiya, waxa ugu horreysa ee uu ka aar-gutaa waa qaranka.
madaxweyne illaa ilmaha carruurta ah kii cadhoodaaba wuxuu ka aar gutaa oo ka cadho burburaa qaranka, Madaxweynihii u horeeyay ee Somaliland cadhadii uu qaaday ayuu Muqdisho iyo federaal ku tagay. Maxamuud Sifir, oo ahaa maamulihii ololihii doorashada ee KULMIYE sannadkii 2003-dii cadho shakhsiyadeed ayuu ku tagay Xamar, Maayarkii hore Berberana waa tii shalay xabsiga laga soo daayay ee uu ka soo noqday Somalia, carruurtii meydkii dadkii jidka lagu dilayna cadhadii ayay maro buluug ah qaateen.”
Xildhibaan Axmedyaasiin wuxuu Guddoomiyaha KULMIYE ku eedeeyay in markii uu ka hadlay shaqaaqada Ceelbardaale uu u muuqday mid kala xigtaysanaya Degmooyinka Dilla iyo Gabilay, kaas oo uu xusay in aannu ahayn hadal u qalma murrashax jago madaxweynenimo u ordaya.
“Waxaan leeyahay Guddoomiyaha KULMIYE Xaaji Axmed Siilaanyo waxaad u socotaa inaad noqoto Madaxweyne qaran oo xukuma Lawyo-caddo illaa Ceelaayo.
Waxa hubaal ah oo caqliga iyo cilmiguba isku waafaqsan yihiin adigoo banaanka taagan oo aan lagu dooranba haddii aad Dilla iyo Gabilay kala xigtaysato, waxa xaqiiqo ah in haddii aad xukunka timaadana aad Burco iyo Hargeysana aanad isku daynayn ee aad kala xigtaysanayso, waxa fiicnaan lahayd in Guddoomiye ay kaa sii muuqato calaamadihii midnimo qaran,” ayuu yidhi Xildhibaan Axmedyaasiin Sheekh Cali.
Waxa kale oo mudanuhu eedayn taa la mid ah u jeediyey xildhibaan Bashiir Tukaale oo ay isku gole ka tirsan yihiin, kaas oo uu sheegay inuu u muuqdo in hooyadii iyo aabihii kala jeclaystay.
Isagoo arrintaa ka hadlayeyna waxa uu yidhi; “Runtii wuu iga geesisan yahay oo isaga natiijo ayaa isoo baxday ah in Hooyadii iyo aabihii kala wanaagsan yihiin, aniguna wali waxaan taagan nahay halkii ninkii lagu yidhi aabahaa iyo hooyadaa keebaa la dilaa ee yidhi afka ayaan ka kala hayaa. laakiin waxaan u malaynayaa in Xildhibaan Bashiir markii la yidhi aabahaa iyo hooyadaa keebaa la dilaa yidhi hooyaday ha la dilo.”
Xildhibaanku wuxuu sheegay in Guurtida Somaliland ahayd mid nabadgelyada lagu yaqaanay, balse go’aankii ay ka gaadhay degaanka Ceelbardaale uu keenay ballaayo weyn, isla markaana degdeg ku jiray.
“Go’aanka Guurtidu mid cadaalad ku salaysan wuu noqon karaa mid cadaalad-darro ahna wuu noqon karaa, waxa is weydiintu tahay Guurtidu go’aanka ay qaadatay ee ay deegaankaasi ka soo saartay ma waafaqsan yahay sharciga mise ma waafaqsana, Guurtidu ma ka daacad bay ahayd oo ay u gashay mise xaalad siyaasadeysan ayaa ku jirtay, Guurtidu waa guurtidiiye waxay ahayd markay dadka walaalayso ee ay magta u kala qaado ayay ahayd in dhulka la isku hayana ay gasho.”
This entry was posted on July 26, 2009 at 11:21 pm	and is filed under 1. Tagged: 1. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.